तपाईंको कम्प्युटरबाट एक आस्टसीलस्कप कसरी बनाउने?
आस्टसीलस्कप कुनै पनि विद्युतीय औद्योगिक आवेदन प्रयोगशाला र पारंपरिक रेडियो कार्यशाला जस्तै प्रमुख साधन को एक छ। यस्तो उपकरण यसलाई विद्युतीय सर्किट को विफलता निर्धारण गर्न, र पनि नयाँ उपकरणहरू को डिजाइन मा आफ्नो काम डिबग गर्न सम्भव छ। तर, यस्तो उपकरणहरू को मूल्य धेरै उच्च छ, र हरेक रेडियो अवैतनिक यस्तो सानो कुरा किन्न सक्नुहुन्छ। यस लेखमा आफ्नो कम्प्युटर बाट आस्टसीलस्कप कसरी बनाउने को प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यहाँ यस्तो उपकरण निर्माण को धेरै विधिहरू छन्, तर जग जताततै छ: impulses स्वीकार हुनेछ भनेर एक बोर्ड एक पीसी ध्वनि कार्ड, र यो संलग्न एक विशेष एडप्टर छ रूपमा। यो मापन संकेत र कम्प्युटर को इनपुट अडियो कार्डको स्तर मेल खान्छ गर्न गर्दछ।
कम्प्युटरमा आस्टसीलस्कप: सफ्टवेयर
उपकरणको मुख्य तत्व को एक मापन निगरानी नाडी प्रस्तुत हुनेछ कि सफ्टवेयर छ। त्यहाँ यस्तो सफ्टवेयर को एक विशाल विविधता छ, तर सबै उपयोगिता स्थिर छन्। किरा AudioTester देखि अवैतनिक रेडियो बीचमा विशेष गरी लोकप्रिय प्रयोग सफ्टवेयर आस्टसीलस्कप Osci। यो एक मानक एनालग उपकरण जस्तै देखिन्छ कि एउटा इन्टरफेस छ, स्क्रिनमा कि संकेत को अवधि र आयाम मापन गर्न अनुमति दिन्छ ग्रिड छ। यसलाई प्रयोग गर्न सुविधाजनक छ, र थप सुविधाहरू यस प्रकार को कार्यक्रम मा फेला परेन एक नम्बर छ। तर हरेक रेडियो अवैतनिक जो उहाँले रुचि सफ्टवेयर, चलाउन चयन गर्न सक्षम हुनेछ।
त्यसैले, आफ्नो कम्प्युटर बाट आस्टसीलस्कप बनाउन क्रममा, तपाईं एक विशेष attenuator (भोल्टेज विभक्त), रूप वाइड मापन भोल्टेज को दायरा कवर गर्न सक्षम हुने सङ्कलन गर्न आवश्यक छ। को एडेप्टरको दोस्रो समारोह - क्षति देखि इनपुट पोर्ट ध्वनि कार्ड उच्च भोल्टेज स्तर हुन सक्छ कि रक्षा गर्न छ। सबैभन्दा ध्वनि कार्ड इनपुट भोल्टेज वोल्ट 1-2 सीमित छ। तपाईंको कम्प्युटरबाट आस्टसीलस्कप एक छ आवृत्ति सीमा अशक्तताको ध्वनि कार्ड। लागत कार्ड उहाँले 20kHz (सिनुसोइडल संकेत) गर्न 0.1Hz हो। तल्लो भोल्टेज सीमा, मापन गर्न सकिन्छ जो पृष्ठभूमिमा स्तर र हल्ला गरेर सीमित छ र 1 भोल्ट र माथिल्लो छ - प्रतिबन्धित एडप्टर मापदण्डहरु र वोल्ट सय धेरै हुन सक्छ।
उपकरण भोल्टेज विभक्त
कम्प्युटर बाट आस्टसीलस्कप एक धेरै नै सरल circuitry छ। यो केवल दुई Zener डायोड र तीन समावेश प्रतिरोधों। मूल्यवर्ग प्रतिरोधों भर्चुअल आस्टसीलस्कप मात्रा मा निर्भर गर्दछ। तीन अलग अलग तराजू लागि यो विभक्त, 1 को अनुपात संग: 1, 1:20 र 1: 100। तदनुसार, यन्त्र रोकनेवाला जोडिएको छ प्रत्येक जो तीन आदानों, हुनेछ। 1 Mohm को दर्जा दिइएको प्रतिबाधा प्रत्यक्ष इनपुट रोकनेवाला। साधारण सञ्चालकको दुई Zener डायोड को उल्टो जडान मार्फत जोडिएको छ। तिनीहरूले रक्षा गर्न डिजाइन लाइन मा स्विच को "आगत" स्थिति छ जब, ध्वनि कार्ड overvoltage। को प्रतिरोधों को capacitors गर्न समानान्तर जडान गर्न सकिँदैन, तिनीहरूले उपकरणको आयाम-आवृत्ति घटक समतल हुनेछ।
यो आस्टसीलस्कप कम्प्युटर एक चिकना, अझै सरल सर्किट डिजाइन मापन भोल्टेज को एक विस्तृत श्रृंखला अनुमति दिन्छ छैन। उपकरण अडियो मरम्मत मदत, वा अध्ययन नाप्ने यन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने।
एक संकर हार्ड ड्राइभमा के हो
माउस कर्सर सार्न गर्दैन, तर माउस काम गर्दछ: कारण र समस्या को समाप्त
MFP सैमसंग SCX-3405W: सुविधा र समीक्षा
प्रोसेसर कोर i7-4790: परीक्षण, वर्णन, समीक्षा
चरण पुस्तिका द्वारा चरण: सेटिङ डी-लिङ्क डीएसएल-2640U
परम्परागत समाज को विशेषता सुविधाहरू
गर्भावस्था को समयमा Yellowish छुट्टी - चासो को लागि एक कारण?
म सपना सपना शौचालय कुरा बुझ्न?
आन्तरिक सेना। युक्रेन: मंत्रालय सेना
बिरालो कहाँ withers: संरचना र सुविधाहरू
हामी प्रकृति बारे उपदेश र वचनहरू पत्ता तीनवटा ठूलो सत्य
घरेलु पनिर संग पाक्नु प्यानकेकहरू
ऋण मा ब्याज कसरी गणना गर्न
को जाडो को रूसी कलाकार को चित्रहरु के हुन्? रूसी कलाकार द्वारा चित्रहरु मा जाडो के थियो?
Place Vendôme - पेरिसको लुकेको आकर्षण